Zenzele ngokwakho i-oveni yegadi Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
Zenzele ngokwakho i-oveni yegadi
22.07.2014 Ithunyelwe ngu: Izixhobo zobugcisa
Ngaphandle kwekona, Igadi, Ikhaya kunye negadi, Kwenze ngokwakho
Ngaba kulula ukwenza i-ovini yakho? Eyona nto ibalulekileyo, ukwenza iziko lokucima umlilo kunye nazo zonke iindidi zezindawo zokucima umlilo bubuqili obunemfihlo ethile kunye neenkcukacha ezinikezelwe yinkosi yomfundi. Nangona kunjalo, xa kufikwa kwigumbi lokuhlangana elivaliweyo, izinto zilula. Ukufezekiswa kombono ovezwe egadini ngumzamo onokuthi uphunyezwe ngempumelelo ngabangengabo iingcali. Ifom inokususwa okanye ithengwe. Ewe kunjalo, ngokungabikho kolwazi malunga nokwakhiwa kwezakhiwo, kuyakufuneka ukuba ufune uncedo lweengcali. Ukukhetha izinto zokwakha kufuneka nazo kuboniswane kakuhle, kodwa ngokuyintloko, le oven iyinto ekulula ukuyiphumeza kwaye zonke izitya ezilungiselelwe kuyo ziya kukwenzela ivumba.
Njengo isindululo sethu seGadi yeBBQ, inani leenkcukacha kufuneka zithathelwe ingqalelo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kude nezinto ezinokutsha. Ukuba unokuhamba rhoqo kwindawo yokwakha, kuyavakala ukuba ukuvulwa kwesithando kuyafana, kodwa oku akubalulekanga.
Ukucwangciswa kwemisebenzi elungileyo yimfihlo yokuphumelela. Ukubona iimpazamo zakho ngaphambi kokuba uzenze kuya kukugcinela imali nexesha. Akukho sicwangciso sigqibeleleyo nesiyindalo. Xa into kufuneka yakhiwe kukho amawaka eenkcukacha ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Kungenxa yoko le nto siya kukunika umbono kunye nezinye iinkcukacha, kwaye nokuphumla kuya kufuneka ukuba ubeke umsebenzi kunye nokucinga kokuyila. Ubungakanani beziko bubaluleke kakhulu. Bayakuchaza ukusebenza kwayo, okt. yintoni eza kubhakwa okanye itshaywe kuyo.
Okokuqala bonisa ububanzi beendlebe (G) kunye nokuphakama kwayo (E). Kuxhomekeka kuzo, imilinganiselo yangaphandle yesakhiwo esixhasayo (A, B, C, D) kunye nokuphakama kwe chimney (F) nazo zimisiwe. Bala kwakhona ubungakanani ngaphandle kokudibanisa (a no-b), ukuba ulindele ukuba ibe nye, kunye nohlobo kunye necandelo lomzobo ofunekayo (c) kunye nobukhulu bezinto (d). Kuyinto enqwenelekayo ukuba umzimba we-chimney ubuncinci ube yi-50% ukuphakama kuneleziko, okanye ukuba ubude (E) yi-50cm, ngoko ke i-chimney kufuneka iphakame (F) ubuncinci i-75cm (ukusuka kwisiseko). Ububanzi nokuphakama kwindawo yokuvula i-vault / orifice (i-f kunye ne-f) kufanele ukuba kukhethwe i-50% yokuphakama kwayo (E). Umahluko kwisimo nobukhulu bunokwenzeka, njengoko oku kuxhomekeke ikakhulu kwiminyango, kwaye ngayo kungalawulwa ngokudibanisa. Ngakolunye uhlangothi, bahlukanisa igumbi lokutsha ukusuka emzimbeni we-chimney, ukudala indawo etywiniweyo.
Khetha izinto zokwakha ezisisiseko kwaye ubale inani olifunayo.
Kolu hlobo lokwakha, ngokungafaniyo Ibarbecue yegadi, kucetyiswa ukwenza i-pedestal, kuba ubunzima obugcweleyo bunokubangela ukuwa okanye ukujija. Thela isiseko sokuqinisa esomeleleyo kwaye uvumele ukuqina. Kwakhe kuwo ukusuka kwiibhlokhi okanye kwizitena iindonga ezintathu ezixhasayo, faka ifomathi kwaye uthululele isilayi yesibini eqinisiweyo. Emva kokuba yomile, dweba, cwangcisa, kwaye ulungise isiseko sesithando sexesha elizayo. Sebenzisa izitena ezingahambisani nobushushu. Yakha isangqa sehhafu yezitena ezizinzileyo ezijikelezileyo, ushiya igumbi lomngxunya. Kuzo, i-engile (ukufezekisa ubungqindilili) imiqolo elandelayo. Kuyacetyiswa, xa ufika kumqolo wesibini okanye wesithathu, ukubumba i-arch yokuvula. Oku kuhlala kuxhomekeke kumnyango okanye kumnyango okhethiweyo. Kukwalungile nokulungiselela iikhadibhodi okanye i-temprofoam ethembekileyo kunye ne-arc ye-hemisphere. Uya kuba nako ukubashiya ngaphakathi kwifom ukuze bakukhokele njengoko usakha ngelixa uxhasa igumbi. Sebenza kancinci kwaye ngendlela; shiya ixesha elaneleyo lokuqinisa into nganye. Xa ugqiba isithando somlilo kunye nokudibanisa kuxinekile, uya kuba nako ukwahlula ezi pateni kwaye uzisuse ngokuvula. Susa i-arch yomngxuma malunga ne-1 / 2 kububanzi bayo ngaphandle komphetho, ushiye umngxuma we chimney. Kufuneka ibekwe kwindawo yokuba xa kuvulwa kuvaliwe, igumbi lokuhlanganisa lingafikeleleki kwioksijini. Rhoqo, kuya kuhlala kunikezelwa isongezo sangaphandle sedaka edadayo, amatye, udongwe kunye nokuhonjiswa kwezobugcisa ngeeyile zeglasi ezenziwe ngesondo okanye ithayile. Xa konke sekumi ngomumo, vumela ukuba ome ngokupheleleyo kangangeveki kwaye ukhanyise i-oveni yakho.
igadi, igiza yepitsa ye-oveni, iziko lokucheba, ukuva iindiza ebaleni, izimvo, izimvo zegadi, izimvo zeyadi, izimvo zekhaya, izimvo zendlu, uluvo lwesithando somlilo, itshimini, yenza iindlebe, zenzele uthuthu, zenzele, Indawo yokucima umlilo nge chimney, iziko, i-oven egadini, i-oveni eyadini, i-oveni ye-pizza, i-oveni yezitena, isitovu se chimney, izimvo zekhaya, uyilo lwangaphakathi, ifanitshala, izimvo zangaphakathi, Yila izimvo, ikhaya lanamhlanje, ukuhombisa izimvo, izimvo zobugcisa
Ezinye iingcebiso ezintle zeli cuisine yale mihla. Imikhombandlela kwiiKomishini zangoku ...
Isakhelo esihle se-crust yeqanda
Umbono olula kwaye mhle wokuba ungayenza njani isakhelo se crust yeqanda. Okokuqala yi ...
Indawo yokucima umlilo
Nangona imigaqo esisiseko ekwakheni indawo yomlilo ekhaya iyasebenza, ...
Ikhekhe leSunflower elimnandi
Le yindlela elula kwaye isebenz kakhulu yokupheka isonka esingenisiweyo. Sebenza nge-puff eyenziwe ngohlobo lokulungisa ...
I-Cozonac - i-cashew yaseRomania kunye nee-walnuts, iidiliya kunye necocoa
I-Bulgaria yemveli kunye neKozunaks yesiRomania inesiseko somgubo ofanayo, umhlaba ...
Khachapuri (waseGeorgia - ხხხჭპურპურ by ხხჭო (hach) - "i-cottage cheese" kunye ne-პური (cigars) "isonka ...
Ukuveliswa kophahla lwamatye yenye yeendlela zakudala kunye nexesha lokuvavanya ukugqiba ...
Iingcamango zearborg zegadi zegadi
Kukho imilo eyahlukeneyo yokwakha iikona zokuphumla kunye nokuzonwabisa.